नेताले चुनावमा चडाएको नमस्कार जनतालाई यति महंगो पर्न आउँछ की आफ्ना नेतालाई एक पटक भेट्न र गुनासो राख्न २० वटा मुस्तण्डेहरुको सामना गर्नुपर्छ । गरिब गाँउबस्तीका मानिसले भोट दिएर जित्ने अनि तिनै गरिबका समस्या नसुनेर सुटेट बुटेट व्यापारीसँग दोस्तीयारी गर्ने ?
त्यसैले नेता ज्युको गाडीमा त सुटेट बुटेट र मगमग विदेशी सेन्ट बास्ना आउनेहरुको लागि मात्र स्थान छ । केही नेताहरुको फुर्ती फार्ती यती बढिसक्यो कि तिनको जीवनशैली र दैनकी हेर्दा लाग्छ ति गाउँघर मा होइन राजमहलमा जन्मिएका हुन् ।
हरेक मन्त्रालयको हेल्पडेस्क गेटमै राखौँ । २ जना कर्मचारी खटाऔ, समस्या सुनौ, समाधान गरौ , १ घण्टा भित्र घर पठाऔँ ।
गरीब, निमुखा, अशक्त, असहाय, महिला, वृद्धवृद्धाहरु घाम पानी, जाडो सहेर सिहंदबार गेटमा दिन भरी कुरेको देख्दा देख्दै कसरी नदेखे जस्तो गरेर हिँड्न सक्नु हुन्छ नेता ज्यु । ५ बर्षपछि फेरी नमस्कार गर्ने बाहेक आफ्नो मतदाता प्रति अरु जिम्मेवारी छैन ?
चर्चित गायक दुर्गेश थापाले आलु जस्तो गायक गीत गाए संगै प्रीतिले पनि गाइन आलु जस्तो केटा